२४ वर्षपछि फेरि फुट्यो एमाले, माधव पक्षका खम्बा मानिने यी नेता किन गएनन् नयाँ पार्टीमा ? – Merokhushi
२४ वर्षपछि फेरि फुट्यो एमाले, माधव पक्षका खम्बा मानिने यी नेता किन गएनन् नयाँ पार्टीमा ?
मेरो खुसी । २ भाद्र, २०७८ बुधबार २२:३४ मा प्रकाशित
निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि जाँदै नेता माधवकुमार नेपाललगायत । फोटो : रातोपाटी
नेपालगन्ज : नेकपा एमाले २४ वर्षपछि फेरि विभाजन भएको छ ।
एमाले यसअघि २०५४ मा विभाजन भएको थियो । पार्टीका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले (समाजवादी) नामको नयाँ पार्टी खोलेका छन् । दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन पनि दिइएको छ । नयाँ दल दर्ताको प्रक्रियामा भने माधवकुमार नेपालका हस्ती मानिने नेताहरु नै अटाएका छैनन् । एमाले उपाध्यक्षत्रय भीम रावल, युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्य, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिवत्रय योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट र भीम आचार्य, पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र अमृतकुमार बोहरा रहेका छन् । पार्टी विभाजन भएकै दिन उपाध्यक्ष शाक्य बागमति प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेकी छन् । पार्टी विभाजन अघि माधव खेमामा रहेको भनिएका अर्का उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि नयाँ पार्टीमा अटाएका छैनन् । केही नेताले अझै पार्टी एकताको सम्भावना रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने केही मौन छन् ।
निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन दिएपछि नेता राजेन्द्र पाण्डेले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका ३१ जना सांसद, एमालेका ५८ जना केन्द्रीय सदस्यसहित ९५ जनाको नयाँ पार्टीको केन्द्रीय समिति रहेको हरु आप्mनो पार्टीमा रहेको दाबी गरेका थिए । नेता नेपालको अध्यक्षतामा गठन भएको नयाँ पार्टीमा नेता झलनाथ खनाललाई वरिष्ठ नेताका रुपमा राखिएको छ ।